DHEGEYSO-Shalaaha dowladda Puntland oo loo fasaxay munaasabadda ciida. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Shalaaha dowladda Puntland oo loo fasaxay munaasabadda ciida.
Seteembar 10, 2016 3:16 b 0
Garoowe, Sep 10 2016–Dowladda Puntland ayaa ku dhawaaqday in shaqaalaha dowladdu ay fasax yihiin maalinka ciida ee ku beegan maalinka Isniinta ah ee 12 Sep ilaa 13 bisha 9aad, munaasabadda ciidul Carafaa Awgeed.
Agaasimaha guud ee shaqada iyo shaqaalaha dowladda Puntland Jibriil Maxamed Saalax oo lahadlay Idaacadda Daljir ayaa hambalyo u diray dhammaan shacabka Puntland gaar ahaan shaqaalaha dowladda oo uu ugu hambalyeeyey fasaxa maalmaha ciida.
DHEGEYSO-Mid kamid ah beelaha Puntland oo taageertay go’aankii madasha doorashada.